Crocus | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Izinhlobo ezivame kakhulu ze-crocuses
Izitshalo zingabizwa ngokuphepha ngokuthi i-harbingers yokuqala yentswasahlobo, nakuba kunezinhlobo eziqhakaza ekwindla. Bangabomndeni we-iris futhi kukhona izitshalo ezincane ezihlala isikhathi eside ezinemibala ehlukahlukene yezimbali. Namuhla kunezinhlobo ezingamakhulu amathathu zalesi sitshalo.
Izimfihlo zokutshala nezikhukhula ezikhulayo ekhaya
Ebusika, i-tender primroses ingaba nomkhathi wokugubha ekamelweni. Ukusebenzisa izindlela ezikhethekile, ungakwazi ukufeza izimbali zazo ngesikhathi esithile, isibonelo, ngoNyaka Omusha. Izitshalo zinjalo izitshalo, kepha ukutshala nokuzinakekela ekhaya kudinga olunye ulwazi nemizamo.
Hlala futhi unakekele ama-crocse ngendlela efanele
Izimbali ezihle kakhulu zentwasahlobo ziyi-crocuses. Baqala ukuqhakaza entwasahlobo futhi bajabule abanye ngemibala yabo kuze kube yizinsuku eziyishumi. Ngemuva kokuba izimbali seziphelile, amacembe asemanzi futhi ahlanzekile, kodwa maphakathi noJuni uhlangothi lwabo luzofika. Ngaphezu kwalokho, i-crocus ifika isikhathi sokuphumula. Kulesi sihloko sizoxoxa konke ongase ube nesithakazelo ngezingqimba.